Ny vohikala ho an'ny mpahay lalàna sy ny lalàna orinasa"Tranonkala, ny Mpisolovava
Ny vohikala ho an’ny mpahay lalàna sy ny lalàna orinasa»Tranonkala, ny Mpisolovava
Isika dia kely ny fahafahana misafidy monina ao Venise, manokana eo amin’ny fanatanterahana ny vohikala ho an’ny matihanina. Fanenomana ny zavatra niainany ny teknisiana ny lalàna, ny famolavolana sy ny fandaharana isika, dia manome ny asa fanompoana matihanina izay, rehefa nahafantatra ny tena hery anaty aterineto, mikasa ny hitondra tsara ny manararaotra ny tranonkala toy ny mpanelanelana amin’ny tontolo ny fampielezana ny vaovao. Toerana mahery, ny hazavana sy ny fifadian-kanina, ny tsy manam-paharoa sy tsara tarehy famolavolana, ireo rehetra naorina mba mba hanamora kokoa hita ao amin’ny pejy amin’ny alalan’ny fikarohana (‘SEO’) sy ny vaovao ny mpampiasa.
Rehetra ny vohikala dia landscaped ary naorina miaraka amin’ny teknika manokana izay manome fahafahana ny pejy mba ho zatra ho azy ny fitaovana isan-karazany izay izy ireo dia aseho. Ranon-javatra grids, malefaka sary, sy ny haino aman-jery fanontaniana mamela ny tandrify fampisehoana amin’ny manara-maso isan-karazany ny fanapahan-kevitra, ny takela-bato, finday avo lenta, finday antitra taranaka, ny tranonkala sy ny tv, ny fanafoanana ny mpampiasa ny mila resizing sy marindrano scrolling ny tranonkala pejy. Isika hanana tanana ao ny tsy manam-paharoa endrika sy madio fehezan-dalàna sy maoderina amin’ny fankatoavana ny fironana farany ny aterineto sy ny finday famolavolana. Amin’ny alalan’ny fampiasana ny fiteny HTML, CSS, sy ny PHP, dia manolotra rehetra ny vao haingana indrindra ny vaovao mifandray amin’ny tranonkala fampandrosoana sy ny fananganana ny fampiharana tranonkala.
Ny endrika ara-teknika, ara-drafitra sy ny sary misy tranonkala dia nanara-maso ny fomba fijerin’ny mpampiasa
Tsy manam-paharoa Famolavolana, entana fifadian-kanina, web ny fiasa sy ny tranonkala manaiky ny tari-dalana amin’ny asa. Silvestrine dia SM ampiasaina amin’ny governemanta, orinasa ary ny fikambanana tsy mitady tombombarotra manerana izao tontolo izao.
Izany no sehatra miavaka tahaka ny tranonkala mpanoratra noho ny hanamaivana ny fampiasana
Amin’ny alalan’ny rafitra fandrarian-dahatsoratra marevaka sy tarihiny sy ny rano indray mitete, ny tonian-dahatsoratra ao amin’ny toerana misy ny manana ny matanjaka sy tena intuitive ny famoahana ny fitaovana ho an’ny tranonkala tsy ilaina ny fahafantarana ny HTML teny dia: raha toa ianao mampiasa ny teny iombonana processor dia efa fantatrao ny fampiasana ny Silvestrine. Ny toerana vaovao ny Vohikala Mpisolovava efa natao amin’ny Adobe Photoshop sy ampiharina amin’ny tanana mampiasa Espresso on the ima.
Ny toerana dia manaiky tanteraka, mampifanaraka mihitsy ny fitaovana izay ianao hijery izany
Cadastre, cadastral fanadihadiana an-tserasera